Ireo paikady mamono ny marketing amin'ny atiny # CONEX | Martech Zone
Omaly dia nizara ny zavatra nianarako momba ny fananganana paikady ABM ao amin'ny CONEX, fihaonambe iray any Toronto miaraka amin'i Uberflip. Androany, namoaka ny fijanonana rehetra izy ireo tamin'ny alàlan'ny fampidirana ny superstar marketing rehetra natolotry ny indostria - Jay Baer, ​​Ann Handley, Marcus Sheridan, Tamsen Webster, ary Scott Stratten mba hitonona vitsivitsy. Na izany aza, ny vibe dia tsy ny atiny mahazatra anao momba ny fomba sy ny toro-hevitra.
Ny hevitro fotsiny, fa ny fifanakalozan-kevitra androany dia bebe kokoa amin'ny fahitsiana ny fomba fampivelaranao ny atiny - manomboka amin'ny dingana, hatramin'ny mangarahara, ny fomba fandinihanao ny mpihaino anao, hatrany amin'ny etikan'ny orinasanao.
Natomboka ny dinika Mpiorina Uberflip, Randy Frisch mizara statistika mampatahotra sy be fanantenana momba ny atiny. Nampiasa fampitahana mahafinaritra (feno amin'ny horonan-tsary) an'ny zanany lahy izy izay nanandrana nilalao hira Justin Bieber tamin'ny alàlan'ny finday, Sonos, ary Google Home. Iray ihany no nanome ny fahatanterahana teo noho eo - Google Home. Ny fampitahana: ny zanakalahin'i Randy dia nitady izay atiny hita tamin'ny rafitra rehetra, saingy iray monja no nanamora ny fitadiavana sy fihainoana azy.
Ity no tontolo iainantsika ary ny antony dia nody tany an-trano tontolo andro.
Tamsen - nandeha tamin'ny antsipiriany be momba ny fampivelarana a Content Matrix Matrix izay manome ny fampahalalana izay manangana ny tetezana eo anelanelan'ny fanantenanao sy anao. Izany dia misy tanjona, olana, fahamarinana, fanovana ary fihetsika ilaina amin'ny antsipiriany hahatratrarana izany mpihaino izany.
Scott - asio fampisehoana mampiala voly sy mahatsikaiky izay nanondro ny maha etika mahatsiravina amin'ny marketing, izay nametrahan'ny orinasa paikady maloto (toy ny fanodinkodinam-baovao) mba hahazoana tombony amin'ny fotoana fohy nefa manimba ny lazan'izy ireo. Araka ny nolazain'i Scott:
Ny etika sy ny tsy fivadihana dia tsy loharano azo havaozina.
Marcus - apetraho amin'ny fampisehoana tsy misy kilema sy haingana izay nampatsiahy antsika fa ny fahamarinana sy ny fahamarinana no tadiavin'ny mpanjifa rehetra rehefa mitady vaovao ao amin'ny tranonkalanao izy ireo, saingy mahalana no mahita fampahalalana mitsikera (toy ny vidiny). Nofaritany ny fomba ahafahanao mamaly ny fanontaniana am-pahatsorana sy lalina, nefa tsy mametraka loza amin'ny orinasanao. Ny mifanohitra amin'izany no nanehoany ny fomba ahafahanao mijoro eo ambonin'ny indostriao amin'ny famaliana fotsiny ireo fanontaniana tadiavin'ny vinavinanao amin'ny Internet.
Ny fientanam-po nasehon'ireo mpandahateny rehetra androany dia nitantara izany tantara izany… ireo mpivarotra atiny dia mamono ny orinasan-dry zareo amin'ny traikefa maloto sy malemy izay tsy mampihetsika ny fanjaitra fotsiny. Mandritra ny mpanjifa sy ny orinasa dia mikaroka sy mitondra ny dian'ny mpanjifany isan'andro. Rehefa mahavita azy tsara ny orinasa dia manome hery ny mpanjifany hahafeno fepetra izy ireo ary hanidy ny varotra nefa tsy misy fifandraisana. Fa rehefa diso ny ataon'ny orinasa dia very ny ankamaroan'ny loharanom-bola tsy mampidi-bola apetrak'izy ireo amin'ny atiny.
Rehefa mampivelatra atiny ho an'ny mpanjifanay izahay dia ataoko mazava tsara fa ny ampahafolon'ny asa ihany no tena azo atolotra. Mampiasa mpikaroka, mpitantara tantara, mpamolavola, mpanao horonantsary, animator ary loharano ilaina izahay rehetra hamokarana ny atiny. Mikaroka mpampita vaovao sy mpihaino amin'ny toerana hametrahana sy hampiroborobo azy izahay. Izahay dia mamakafaka ny fifaninanana, ny orinasa, ny mpanapa-kevitra tena izy, ary ny lafiny rehetra amin'ny fahitana ny dia alohan'ny hanokafana izany fehezan-teny voalohany izany.
Ity no lalao lava. Tsy milalao hira malaza izahay fa milalao hazakazaka… handresy. Ary handresy, ny mpivarotra dia tsy maintsy miantoka fa ny orinasan'izy ireo dia heverina ho marina, mendri-pitokisana, manan-kery ary vonona hanompo. Ary rehefa ataontsika tsara dia mandresy foana isika.
Ny fifandirana atiny
Tsy misy fomba ahafahako mamarana ity lahatsoratra ity amin'ny andro ao amin'ny CONEX tsy misy firesahana Ny fifandirana atiny. Miaraka amin'i Jay Baer, ​​mpampiantrano tsy mampino, ity seha-potoana ity dia iray amin'ireo hetsika mahafinaritra indrindra, mamorona indrindra hitako tamin'ny fihaonambe iray. Bravo ho an'ny CONEX amin'ny famokarana ity tsy mampino traikefa.
Tags: Ann Handleyconexvotoatin'ny kaonferansaetikamanao ny marinamivadikaJay BaerMarcus Sheridanfihaonambe fivarotanascott strattenTamsen Websterny fifandirana atinyfahamarinanauberflip